Ko ini ndinokwanisa kutsvaga purojekiti yangu yekutsvaga kubudirira kuburikidza nekutsvaga injini yekufambisa kwe UK domain name extension?
Mazuva ano, kune pfungwa inowanikwa paIndaneti pamusoro peimwe nzira yakasimba simba re dot dot UK zita rekuwedzera. Zvinonyanya, zvinotungamirirwa ne-search injini optimization UK yakatevedzana paInternet-starts ups mazita mazita anoonekwa iye zvino mafashoni ekupedzisira uye akakwana zvakakwana. Zvakanaka, vazhinji vevanhu vose vakanzwa nezvemazhinji emasangano ane zviratidzo uye marongerwo akajekeswa uye akaunzwa kubudirira kwavo nedzimwe zita rezita.
Zvakanaka, tinofanira kuzvibvuma-kuumba urongwa hwekutengesa ndicho chinhu chekutanga chekuita munguva yekutanga yeimwe purogiramu yebhizimisi iri paIndaneti. Uye kusarudza zita rakanaka rekuwedzera zita ndiro mushure wepurogiramu yese yekudhinda. Nenzira iyo, kuenda kunotsvaga injini yekutsvaga pasi pepa dot domain RU, somuenzaniso, inenge ichisarudzwa chisarudzo chakaitwa nebhizinesi rose kwete kungoita kuvepo kwayo paIndaneti, asi kuisa kutanga kwekubudirira kwechiratidzo, uye kupa chiedza chemavara kune vamwe vanorarama vanhu vachitsvaga pa backlink rinotungamirira kumapeji ako ewebhu.
Unogonawo kundibvunza mubvunzo wakajeka - shure kwezvose, wadii kutsvaga zita rinonyanya kuzivikanwa neDOT domain name? Zvose zvinenge zviri nyore, sezvo nzvimbo ye dot COM iri kuve nzvimbo yakazara yakawanda yekutama kwakakwana. Uyewo, chengetedza mupfungwa, kuti kuva nehutsvene yekutsvaga injini pasi pedhidziro UK inogona kuva nzira yakanaka yekuita bhizimisi munzvimbo yako pane imwe nguva. Pashure pezvose, ndiri kuenda kunotsvaga kutsvakurudza kwakapedzisira kushandiswa na Nominet, iyo mishonga yheyo inotarisirwa neka dot UK domain name uye inotarisira nzvimbo iyi inenge iri munzvimbo yepasi rese iri muIndaneti. Saka, apa pane zvimwe zvinyorwa uye mamwe mashoko akatsigirwa neanoverengeka nhamba nhamba, kubva pakuona kwekutsvaga injini kugadzirisa pasi petazi UK zita rechirongwa zita rekuwedzera:
Kuenzaniswa kune dzimwe mawebsite, mapeji iwayo ending in. UK inowanzowana chivimbo chikuru uye simba pakati pevashandisi;
Dot UK chivako chekuwedzera chiine mazita akawanda anoshandura mafungiro ako aunofanira kusarudza kubva, apo bhizinesi rako rinounzwa zvizere muchikwata chenzvimbo yako (izvo zvinoreva iwe unogona kusununguka kusarudza zvimwe madzinza anozivikanwa seano. uk, kana. uk, ini. uk kana kuvashandisa gare gare sezvaunofarira, somuenzaniso kugamuchira webhusaiti yako itsva munguva yakareba);
Zita renzvimbo inoguma. UK kana inopa kuberekerwa kune webhusaiti yemasangano, inotsigira bhizimusi kutanga-up, kana kuti inongowanikwa pane rimwe registry - imwe yeiyi inowanikwa imwe nguva pamwe nemaminitsi mashanu akapfuura;
Uye pano inouya chidimbu chemashoko akanaka chaizvo kune avo vezvemabhizimisi vari muIndaneti vanoita mabhizinesi avo paInternet, uye vachishanda zvikurukuru nokutengesa zvinhu kana mabasa. Maererano nekuongororwa kwechangobva kuitwa naNominet, pane makumi masere makumi manomwe ezana ekutenga kwevanhu vakuru vanouya kuburikidza ne dot UK zita rekuwedzera Source .